General News – EnviroZim.com
June 23, 2022 - by Newsroom
By Kudakwashe Pembere THE Pomonagate scandal has scaled new heights with Local Government and Public Works Minister, July Moyo ordering the City of Harare to pay over USD 780 000 …
June 21, 2022 June 23, 2022 - by Newsroom
Home Affairs and Cultural Heritage Minister, Honourable Kazembe Kazembe ROBBERIES are increasingly becoming a menace in Gwanda given the town is a mining town attracting hoards of robbers. This was …
Cheers at Gwanda Old People’s Home as Mat South MP donates food items
May 29, 2022 May 31, 2022 - by Newsroom
By Kudakwashe Pembere ELDERLY residents at Gwanda Old People’s Home received a surprise treat from Matebeleland South legislator Honorable Sipho Ndlovu-Mokone who donated food items at the place on Saturday. …
Newly Launched eNShow gets on National TV
May 22, 2022 May 26, 2022 - by Newsroom
By Kudakwashe Pembere ZIMBABWE’S newest lifestyle talkshow, The eNShow, hosted by seasoned Marketing and public relations executive Emily Nemapare, joins the ZBC Sunday evening line up. The show is scheduled …
By Kudakwashe Pembere A SOUTH Africa based Zimbabwean singer-producer will on May 25 release his latest offering which features a prominent South African musician. The 21 year old artist born …
Murindagomo, The tale of the magic finally premiers
April 16, 2022 April 25, 2022 - by Newsroom
By Nyarai Chidzero THE long awaited epic film Murindagomo ,The tale of the Magic finally premiered this Easter on the PlayAfrikaTV mobile App. The writer, producer and director of the …
Canada based Zimbabwean wanted for financing CCC
March 27, 2022 May 11, 2022 - by Newsroom
By Staff Reporter A ZIMBABWEAN based in Canada fears for his life should he return to the country for he is wanted by authorities for financing the Coalition for Citizens …